Kitaabka Quduuska ah Rajo Buu Ina Siiyaa — ONLINE LAYBREERIGA Watchtower
lffi cashar 2
Kitaabka Quduuska ah Rajo Buu Ina Siiyaa
Waxyaalo la Mid ah
SI FIICAN UGA FEKER
Dunida oo dhan dadku waxay la kulmaan dhibaatooyin keeno murugo, welwel iyo xanuun. Adigu weligaa ma la kulantay xaalad dareemadaas oo kale kugu dhalisay? Waxaa laga yaabaa inaad jirran tahay ama la murugoonaysid geerida qof ad jeceshahay. Waxaad isweyddiin kartaa, ‘Ma jirtaa maalin ad sidan dhaami doontid?’ Kitaabka baa bixiya jawaab kalsooni iyo qalbiqaboojis leh.
1. Sidee buu Kitaabka rajo inoo siiyaa?
Kitaabka wuxuu inoo sheegaa sababta ay dhibaatooyin badan dunida uga jiraan. Wuxuu kaloo ina siiyaa war wanaagsan, inay dhibaatooyinkan mar dhow dhammaan doonaan. Ballamada Kitaabka waa kuwo hadda iyo ‘ugudambaysteenna rajo ina siiyo.’ (Akhri Yeremyaah 29:11, 12.) Waxay xitaa inagu caawiyaan inaan u dulqaadanno dhibaatooyinka maanta jira iyo inaan yeelano aragti wanaagsan iyo farxad joogta ah.
2. Mustaqbal caynkee ah ayuu Kitaabka inoo sharaxaa?
Kitaabka markuu mustaqbalka ka hadlayay wuxuu yiri: “Dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona.” (Akhri Muujintii 21:4.) Dhibaatooyinka maanta nolosha ka dhigi kara mid adag oo rajo lahayn sida faqrinimada, caddaaladdarrada, jirrada iyo dhimashada, ma sii jiri doonaan. Kitaabka Quduuska ah wuxuu ballanqaaday inay binuʼaadanku weligood ku raaxaysan doonaan adduun Janno ah.
3. Sidee baad u kordhin kartaa aamminaadda ad u qabtid ballamada Kitaabka?
Dad badan baa rajeeya wax wanaagsan, haddaba ma hubaan inay waxyaalahaas dhici doonaan. Kitaabka ballamadiisa sidaas way ka duwan yihiin, waayo waa kuwo rumoobi doono. Aamminaaddeenna waxaan kordhin karnaa markaan si fiican u ‘baadhno Qorniinka’ Quduuska ah. (Falimaha Rasuullada 17:11) Markaad dhigatid Kitaabka, ayaad dooran kartaa inaad aammini doontid wuxuu mustaqbalka ka sheego ama in kale.
Eeg waxyaalaha uu Kitaabka mustaqbalka ballanqaaday oona arag rajada Kitaabka siday maanta dadka u caawiso.
4. Kitaabka wuxuu bixiyaa rajada nolol weligeed ah oo kaamil badan
Bal eeg ballamada Kitaabka oo hoos ku qoran. Midkee baad jeceshahay? Maxaad kaas u dooratay?
Akhri aayadaha ku xigo ballamadan, kaddibna ka jawaab suʼaalaha hoos ku qoran:
Aayadahan rajo ma ku siiyaan? Ma u maleysaa inay reerkaaga ama asaxaabtaada rajo siin karaan?
Bal ka feker duni uu
QOFNA LA KULMI DOONIN . . .
QOF WALBA HELI DOONO . . .
murugo, duqow, iyo dhimasho.​—Ishacyaah 25:8.
fursadda uu ku arko dadkii ka dhintay oo dhulka dib loogu soo nooleeyay.​—Yooxanaa 5:28, 29.
jirro iyo curyaannimo.​—Ishacyaah 33:24; 35:5, 6.
caafimaad iyo xoog.​—Ayuub 33:25.
caddaaladdarro.​—Ishacyaah 32:16, 17.
cunto ku filan, aqal qurux badan iyo shaqo wanaagsan.​—Sabuurradii 72:16; Ishacyaah 65:21, 22.
silica dagaallada.​—Sabuurradii 46:9.
nabad aan dhammaad lahayn.—Sabuurradii 37:11.
xusuus iyo feker xanuun leh.​—Ishacyaah 65:17.
nolol wacan oo weligeed ah.—Sabuurradii 37:29.
5. Rajada Kitaabka noloshaaday beddeli kartaa
Dad badan ayaa ka niyad jabsan oo ka xanaaqsan dhibaatooyinka ay dunida ka arkaan. Qaar ka mid ah waxay u dagaallamaan inay wanaag keenaan. Haddaba Kitaabka wuxuu ballanqaaday inay wax walba fiicnaan doonaan. Bal eeg siday ballantaas maanta dadka u caawin karto. Daawo FIIDIYOWGA, kaddibna ka hadla suʼaalaha hoos ku qoran.
FIIDIYOWGA: Waxaan Rabay Inaan Ka Hor Tago Caddaaladdarrada (4:07)
Caddaaladdarradee ayay Rafika la kulantay?
Inkastoo aysan caddaaladdarradu dhammaanin, sidee buu Kitaabku u caawiyay Rafika?
Rajada uu Kitaabka mustaqbalka ka bixiyo ayaa inagu caawin karto inaan niyadjabka ka hor tagno oo dhibaatooyinkeenna u samirno. Akhri Maahmaahyadii 17:22 iyo Rooma 12:12, kaddibna ka hadla suʼaalaha hoos ku qoran:
Ma u maleysaa inay rajada Kitaabka ku qoran noloshaada hadda wax ka beddeli karto? Waayo?
DADKA QAARKOOD WAXAY DHAHAAN: “Ballamada Kitaabka ee mustaqbalka ku saabsan waa wax iska riyo ah oo run ma noqon karaan.”
Maxay muhim u tahay inaad iskaaga u hubisid in la aammini karo wuxuu Kitaabka sheego?
Mustaqbalka farxadda badan uu Kitaabka inoo ballanqaadday wuxuu ina siiyaa rajo iyo caawimaad sidaan ugu dulqaadanno dhibaatooyinka maanta ina haysta.
Maxay dadku rajo ugu baahan yihiin?
Muxuu Kitaabka mustaqbalka ka sheegaa?
Rajada ad mustaqbalka ka qabtid sidee bay hadda kuu caawin kartaa?
Taariikhda casharka la dhammeeyay:
Akhri aayadaha casharkan ku qoran sidaad u baratid ballamada Kitaabka.
Dooro wax kale:
Wax kale ka sii baro awoodda ay rajada leedahay.
“Hope​—Where Can You Find It?” (Awake!, Abriil 22, 2004)
Bal fiiri siday rajada mustaqbalka ku saabsan u caawisay dadka qaba jirrada joogtada ah.
“Kitaabka Caawimaad Muu Ka Bixiyaa Jirrada Joogtada ah?” (Maqaalka webka)
Fiidiyowga heestan markaad daawatid ka feker adiga iyo reerkaaga oo ku raaxaysanaya nolosha Jannada uu Kitaabka mustaqbalka ballanqaaday.
Imagine the Time (3:37)
Arag siday nolosha nin xuquuqda u doodi jiray u beddelmatay markuu bartay rajada Kitaabka ee mustaqbalka ku saabsan.
“I No Longer Feel That I Have to Change the World” (The Watchtower, Luulyo 1, 2013)